Qadar kamida tariikhda EU-da - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Qadar kamida tariikhda EU-da
Laga soo bilaabo sannadkii 1870 illaa iyo 1945 waxey dawlladdaha Faransiiska iyo Jarmalku dhex marey saddex dagaal oo cul culs ayna dad badani naftooda ku waayaan.
Taasina waxeey sababtey in ay hogaamiyeyaal badan ee ku nool qaaraddan Yurub ay isweey diiyaan sidii xal loogu heli lahaa dagaalka soo laa laaba na hay ee labadaan dal.
Kulamo iyo wada tashiyo badan kadib ayaa xalka laysku tusey in la mideeyo awooda labada dal, iyo wax soo saar kooda. Sannadkii 1950 ayuu wasiirkii arrimaha dibadda ee Faransiiska ee waagaasi, Robert Schuman wuxuu soo jeediyey in la mideeyo warshadaha dhuxusha iyo kuwa biraha ee dalalka ku yaala galbeedka Yurub, taasina ay xasilineeyso dhibaatooyinka tartan iyo wax kala jacleeysiga.
Waxaana dhidibada loo aasay urur mideeya warshadaha dhuxusha iyo birta,kaas oo looguma magac darey EKSG), ayna ku midoobeen xibin ka ahaanshadiisa lix waddan ku waas oo kala ahaa Faransiiska, Jarmalka Galbeed, Talyaaniga Beljinka, Lusemburg, iyo Niderland.
Waxaa isla goobtaasi lagu aasaasey heyad ka madax bannaan waddammadaa awoodna u leh go’aaminta EKSG, iyada oo madaxii ugu horeeyey ee ururkaasina uu noqdey Jean Monnet.
Jiritaan kii ururkii ESKG wuxuu noqdey mid baahiyo badan daboola isla markaana, waxeey lixda dawladood go’aansadeen in la sii xoojiyo isdhexgalka dhaqaalaha ee wadamadaas. Sannadkii 1957-dii ayaa haddaba la soo saarey bayaankii Room halkaasina oo lagu aasaasey ururkii (Euroatom) ee lagu mideeyey awoodda Atomka ee Yurub, iyo ururka barwaaqasooranka Yurub kuna saleysnaa dhaqaalaha ee loo yiqiin EEC oo ujeedada ka danbeeysay ay aheed in laysku furo xuduudyada dhaqaale ee wadamadaas, waa suuq furan ee ka dhexeeya lixdaas waddan.
Sannadkii 1967-dii ayaa sameeysteen guddi talo bixin dhinaca kalana laysku geeyay hayado badan oo kala qeeybsanaa markii hore. Gudigaas oo sameeystey wasiirro iyo baarlaman ka dhexeeya.
Sannadku markuu ahaa 1992-dii ayaa la soo saarey bayaan loogu magac darey bayaankii Mastrikh kaas ooo lagu go’aamiyey hab cusub ee wada shaqeyn ka dhaxeysa waddammada ku jirey ururka barwaaqasooranka Yurub. Bayaankaas oo xanbar sanaa sidii loo xoojin lahaa iskaashiga dhinac yadda ciidammada, shuruucda iyo arrimaha gudaha iyo waliba isdhex galka dalalkaas. Halkaas ayuuna ka abuurmay magaca EU-da.
Ilaa iyo waxii ka danbeeyay waqtigaasna waxeey dalalkaasi gaara hayeen heshiisyo wada jir iyo iskaashi dhinacyo badan. Sannadkii 1992-dii waxaa EU-du gaartey go’aan in la sameysto urur dhaqaale ee leh lacag wadajir ah ee loogu magac darey Euro. Taasi oo hirgashey 1-dii jannaayo ee sannadkii 2002-dii. Heshiiskaa waxaa ku jirin waddammo ay ka mid yahay dakaan Iswiidhan, Ingiriiska iyo Danmark.
19 xibnoodna waa uga mid xubnaha baarlamaanka midowga Yurub oo gaara hay 736 xibnood oo ka kal yimaada 27dal ee ku midoowday ururkaan. 1julaay ayeeyna Iswiidhan marti galin doontaa sanda gudoomiye nimada.